Five star အနီး Mini Condo အငှား
☘️ငှားမည်........ ☘️ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ☘️ကုန်သည်လမ်းမပေါ်(five starရုံးအနီး) ☘️Mini Condo ☘️ 1 floor.....5သိန်း ☘️20×50 ☘️2BR,Ac...
မင်္ဂလာဒုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
5 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | လုံးချင်းအိမ်
ေဝဘာဂီ ေျမညီ တစ္လ ၂သိန္း အျမန္ငွါးမည္
Pls adm တင္ခြင့္ျပဳပါ႐ွင့္ တိုက္ခန္းငွါးမည္ ေျမာက္ဥကၠလာ ေဝဘာဂီ ေျမညီထပ္ ၁၃ေပx၅၀ေပ ေရမီးစံု အိပ္ခန္း၁ခန္း ဘိုထိုင္ တစ္အိမ္လံုးေႂကြျပားခင္း တစ္လ ၂၀၀၀၀၀ ၆လခ်ဳပ္ သို႔ စေပၚ၁၀သိန္း ၀၉...
(12½'x60')အကျယ်၊ တာမွေ၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းမ၊ တာမွေအဝိုင်းထိပ်၊ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိ
2.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
တည်နေရာ - တာမွေအဝိုင်းထိပ်၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းမ၊ တာမွေမြို့နယ်။ အကျယ်အဝန်း - (12½'x60')အကျယ် အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - Single Bed Room(1)ခန်း, Air-con(2)လုံး, ကြွေပြားကပ်, ပါကေးခင်း ဈေးနှုန်းသင့်...
တောင်ဥက္ကလာပ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1.80 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
#တိုက်ခန်းအငှါး Hall type တောင်ဥကလာ ကျော်သူလမ်းသွယ်(waizayantar citymart အနီး) 9ရပ်ကွက် မြေညီအပါ 5လွှာ တိုက်ခန်းငှားမည် 6လ/1နှစ်ချုပ် 180000ks 09799262499
RMC2-002753, For Rent First Floor Mini Condo, ၈ လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္ ဓါတ္ေလွခါးပါ တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္။...
လမ်းမတော်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | ကွန်ဒို
RMC2-002753, For Rent First Floor Mini Condo, ၈ လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္ ဓါတ္ေလွခါးပါ တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္။ Located Area = 8 Street,Near Junction Mawtin Centre, Lanmadaw Township,Yangon. Floor Level = 1 Floor. Building Type = 6.5 Storey ( With Elevater). Room Space = 25’x50’ Room Type = 1MBR, 1SBR Facilities = Including3Nos of...
အာယုဆေးရုံအနီး လမ်းသန့် ကွန်ဒိုငှားမည်။ --------------------------------- တလ ၄၅၀၀၀၀ (ညှိနှိုင်းစျေး) --------------------------------- အာယုေဆးရုံအနီး၊ ရပ်ကွက်သန့်၊ လမ်းသန့်၊ တာမွေ။ ၆ လွှာ(ဓါတ်ေလှခါးပါ) မာစတာအိပ်ခန်း ၁...
ဈေးနီး...ကျောင်းနီး...ဆေးရုံ. ybs ဂိတ်နီး...အသွားလာအချက်ချာကျသောနေရာ... ဌားမည်
တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိ၊ မဒဂုံ၊ဗိုလ်မင်းရောင်အိမ်ရာ၊ ပထမထပ်
3.20 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
Near Bus Stop, Bank, Dagon Centre.2Aircon included. Ready to stay and able to move immediately.
အင်းစိန်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
190 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
15’x40’ အခန်းကျယ်,ဈေးနီး,ကျောင်းနီး,အင်းစိန်မြို့နယ်ပေါက်တောဝမှတ်တိုင်အနီး မုဒိတာအိမ်ရာ-၂, ၇လွှာ, ဓါတ်လှေခါးပါ၊ လုံခြုံရေးရှိ, သန့်ရှင်းရေးရှိ, ရေတင်စရာမလို, အမှိုက်သိမ်းရှိ, အခန်းပြင်ဆင်ပြီး, မီးဖိုခုံ, သံပန်းပါပြီး။ စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း 0943053369/09770746399...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
478 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် လမ်းမကြီးပေါ် အပေါ်ဆုံးထပ် ၄၇၈သိန်း ဈေးညှိပေးပါမယ် ထပ်ခိုး ပါလို့ ပစ္စည်း လဲတင် လူလဲ ထပ်ခိုးမှာ အိပ်ခန်း အဖြစ်လဲ အသုံး ပြုလို့ ရပါတယ် အခန်းပြည့် ကျွန်းပါကေး (၉-၃-၁) ခင်းထားပါတယ် အိပ်ခန်းကျယ် ၁ခန်း ထမင်းစားခန်း ဘိုထိုင်အိမ်သာ ရေချိုးခန်း မီးဖိုခန်း ဝရန်တာ ကြွေပြား အပြည့် ခင်းထား ကျောင်း ဈေး မှတ်တိုင်နီး ပြီး ညနေပိုင်းဈေးလဲ လမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ် Air con 2လုံး ပါပြီး ဝရန်တာ နောက်ဖေး ရယ် sun shade တပ်ပြီး သံဘန်း လုပ်ထားလို့ လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့် ရှိပါတယ် ဓါတ်လှေခါးမပါပေမဲ့ min...
ဒေါပုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
320 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
🎀ချစ်စရာ ထပ်ခိုးပါအခန်းလေး 🎀 ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ရောင်းမည် ပွဲစားမလိုပါ 🏠 လိပ်စာ 🏠 ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ကြည်စုရပ်ကွက် ၊ ၆လွှာ ကန်သာယာ ၂လမ်း ( အကျယ် 12 ပေခွဲ 55 ပေ ရှိ တိုက်ခန်း ) 🚘ဝါဆိုမှတ်တိုင်ကနေ လမ်းလျှောက်မယ်ဆို ၅မိနစ်လောက်🏃 ​🦐ဒေါပုံဈေးက ဘေးလမ်းမှာပါ 🌨၆ လွှာမို့ မိုးရေ မယိုပါဘူးနော် တိုက်ပြီးထားတာ တနှစ်ဘဲ ရှိပါသေးတယ် ⛅️လေကောင်းလေသန့် တစ်ကယ်ရပါတယ် 🏠Sun Myat Htun Construction က ဝယ်ထားတာပါ pile နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်လေးပါနော် BCC က...
932 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
🙏🙏မင်္ဂလာပါရှင်🙏🙏 🏠🏠 လှိုင်မြို့နယ် ၊အင်းယားကန်ဘောင်အနီးတွင်တည်ဆောက်ထားသော တိုက်ခန်းအရောင်းကြော်ငြာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ 🏠🏠 ✅✅ကန်လမ်းမအနီး ✅✅ ( 17.5 × 50) ✅✅ 2BR, A/ C, ပါကေးခင်း ✅✅ ပြင်ဆင်ပြီး ✅✅ပထမထပ် (1F) ✅✅ 932Lkhs (Sale 🙏 Negotiable) 👈 ✅✅ Living ➰ Dining &amp; Kitchen room .☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎ ✅ စျေးနှုန်းမှာညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ရှင်။ ☎️ဆက်သွယ်ရန်:09756435886...
400 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဈေးနီး၊ကျောင်းနီး၊ လမ်းသန့်၊ ကားပါကင်စိတ်မပူရ။ သီတာလမ်း၊လှိုင်မြို့နယ်
25ပေ x 35ပေ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
950 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
လှိုင် လှိုင်မြင်းမိုလ်အိမ်ယာ ရောင်းမည်။ 25ပေ x 35ပေ 1F 2BR 1AC သိန်း 950L
15'x50' တိုက်ခန်းရောင်းရန် ရှိသည်။
15'x50' တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ လှိုင်မြို့နယ်, ၂ ရပ်ကွက်, သီရိ(၅)လမ်း, ရန်ကုန်မြို့။ အိပ်ခန်း ၁, ရေချိုးခန်း ၁, အိမ်သာ ၁, ဝရံတာ နှင့် ပြတင်းပေါက်များ သံပန်း sunshade တပ်ဆင်ပြီး, မီးဖိုခုံ နှင့် ဝရံတာ ကြွေပြားကပ်ပြီး, ဘေး ၃ ဘက် တိုက်ကွယ်မရှိ, လေဝင် လေထွက်ကောင်း, ၆လွှာ အပေါ်ဆုံး အထပ် ဈေးနီး, ကျောင်းနီး, ဘဏ်နီး, ကားဂိတ်နီး, ရပ်ကွက်သန့်, နေရာကောင်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းမည်။ ဈေးနှုံး ၃၂၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) လက်ရှိ အိမ်ငှား တင်ထားပါသည်။ ph: 09 402511049 ph: 0065 83206044...
ရွှေပြည်သာ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
240 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ရွှေပြည်သာ (၉) ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ အိမ်၂ လုံးပါ ၁ လုံးမကောင်း ၁ လုံးအိမ်ငှားတင်ထား ၂၄၀ (ညှိနှိုင်း)
530 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
Bccကျပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင် ထပ်ခိုး မှန်ခန်းအပါ... သဘော်ကျင်းရပ်ကွက်...မြို့ပတ်လမ်း
850 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
စမ်း​ချောင်း ဦးစံညွန့်လမ်းတွင်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းကျယ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ၄လွှာ ခြေရင်းခန်း အရှေ့လှည့် အကျယ်(၁၇ပေ×၅၅ပေ) Aircon ၁လုံး Pressure pump ၁လုံး ရေတိုင်ကီ ၃လုံး Sanchaung Garden အနီး Sprit နှင့်နီးပါသည်။ ခေါ်စျေး သိန်း၈၅၀ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု့၍အခန်းကြည့်လိုပါက ၁ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရှင့် Ph: : 0951 88025 ........0979 8464726 ........0979 8892235 ........0979 6281915...